पेट्रोल पम्पमा कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा — Ratopost.com News from Nepal
पेट्रोल पम्पमा कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई एकत्रित हुन रोक लगाइएको छ ।
तर पेट्रोल पम्पहरू खुला छन् । पछिल्लो समय पेट्रोल पम्पमा कोरेना भाइरस धेरै दिनसम्म जीवित रहन सक्ने दाबीहरू आइरहेका छन् । युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका भाइरोलोजिस्ट डा. जोय ग्रोबका अनुसार कुनै धातु अथवा प्लास्टिकबाट बनेको सतहमा भाइरस कैयौं दिनसम्म जीवित रहन सक्छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका सहायक डोमिनिक कमिङ्सविरुद्ध लकडाउन उल्लंघन गरेर लन्डनबाट दरहमको दुईतर्फी यात्रा गरेको आरोप लागेको छ । यात्राका दौरान के उनी कुनै सर्भिस स्टेसनमा रोकिएका हुन सक्ने पनि आरोप लगाइएको छ । यद्यपि डोमिनिकले आफूमाथि उठेको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
डा। ग्रोबले हरेक व्यक्तिमा संक्रमणको स्तर फरक हुने भएकाले डोमिनिकको विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताएका छन् । तर सर्भिस स्टेसनजस्ता स्थानमा भाइरस केही समयसम्म रहन सक्ने विषय चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ । डा. ग्रोबले भने, “यदि कुनै व्यक्तिको हातमा भाइरस छ भने यस्तो स्थानमा भाइरस रहने खतरा अत्यन्तै बढी हुन्छ ।” बीबीसी